ChiGerman, Germany rubatsiro rwakakosha - GERMANX
« : Mbudzi 14, 2016, 03:14:52 ndiri »
Pane slm shamwari here mugermany turkey yekare-maruva maruva uye zvipo chichava chimwe chinhu chesaiti dzangu
Re: kukosha kwakakosha
« Reply #1: Mbudzi 15, 2016, 12:20:22 ndiri »
Kufanana nei? Saka ndezvekutengesa kana kutengesa here? Ichave inorarama here? Kune mamirioni acho? Rega ndikubatsire kana iwe ukandiudza chaizvo zvauri kutsvaga
« Reply #2: Musi waNovember 15, 2016, 04:39:24 pm »
mukomana wangu aripo saka ndiri kutsvaga saiti inotumira maruva mhenyu uye inogona kutenga zvipo
« Reply #3: Zvita 05, 2016, 05:33:54 pm »
https://www.floraprima.de/?gclid=CNb_yKGi3dACFQaVGwodYMACGQ Ini ndakamboshandisa saiti kare. vakatumira pasina dambudziko. Ndinovimba zvinobatsira.Tarisira zvakanaka nguva dzako dzekutumira kuitira kuti dzizobva munguva.
Ruzivo rwunowedzera SEZVINOGONESERWA
« Reply #4: Zvita 05, 2016, 09:01:15 pm »
SA muTurkey nekuyambuka yero logo Interflora chero
Iwe unogona kuzviita kubva kumaruva asiwo online pane saiti. Interflora Turkey, Maruva, Florist, Ruva kuodha? Ini, kunze kwenyika ??? Ruva, International? Ruva, Rose Bouquets, Pamhepo, Zuva raAmai Iyi kambani inopa epasirese masevhisi kutenderera pasirese. Ndinovimba ndakabatsira. Chingave chakanakira kuchipa kana mazuva matatu pamberi.
SEZVINOGADZIDZWA Ruzivo, ZVINowedzera.